Semalt no mampiseho ireo fitaovana fanamafisana ny tranonkala tsara indrindra mba hikapohana ireo tranokala
Ny script na programa maoderina dia mampiasa ny metodika amin'ny fomba metimety sy amin'ny fomba feno, mikendry ny angon-drakitra vaovao sy misy. Matetika ny fampahalalana ilaintsika dia voafandrika ao anaty bilaogy na tranokala. Na dia manao ezaka aza ny tranonkala sasany mba hampisehoana ny angon-drakitra amin'ny rafitra natokana, voalamina sy madio, dia maro amin'izy ireo no tsy manao izany. Ny fitifirana, ny fanodinana, ny fanasarahana ary ny fanadiovana dia ilaina amin'ny orinasa an-tserasera. Tsy maintsy manangona fampahalalana avy amin'ny loharano maro ianao ary mamonjy azy ao amin'ny tahiry fandraiketana ho an'ny tanjona ara-barotra. Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy mandalo ireo forums sy vondrom-piarahamonina anaty aterineto ianao mba hahazoana programa, rafitra ary rindrambaiko mba hahazoana angona avy amin'ny tranonkala iray.
Cyotek WebCopy dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tranonkala sy mpitsikilo ao amin'ny aterineto. Fantatra amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny aterineto, mora ampiasaina izy io ary mahatonga antsika ho mora foana ny manara-maso ireo fikarohana maro samihafa. Ankoatra izany, dia azo alefa io programa io ary miaraka amin'ny tahiry backend multiple. Fantatra ihany koa fa ny fanohanan'ny filazam-baovaon'ity hafatra ity sy ny endriny ampiasaina. Ny fandaharam-potoana dia afaka mamerina mora foana ny pejy Internet tsy mety, manindry tranokala na blôgy amin'ny taona ary manao asa maro samihafa ho anao. Cyotek WebCopy dia mila klioba roa hatramin'ny telo mba ahafahanao manao ny asa vita ary afaka maka mora mora ny data. Azonao ampiasaina ity fitaovana ity amin'ny endrika vertex izay misy mpitsikilo maromaro mandeha miasa. Izy io dia mahazo alalana amin'ny Apache 2 ary novolavolain'i GitHub..
HTTrack dia tranombokim-pitadiavana malaza izay naorina manodidina ny tranomboky malaza sy samihafa HTML izay antsoina hoe Soa tsara tarehy. Raha tsapanao fa tokony ho tsotra sy miavaka ny tranonkalanao, dia tokony hiezaka haingana araka izay azo atao io programa io. Ho mora sy tsotra ny fampihetsiketsehana. Ny hany zavatra ilainao hatao dia ny kitihina boaty vitsivitsy ary hiditra ao amin'ny URL ny faniriana. HTTrack dia nahazo alàlana tamin'ny lisansa MIT.
Octoparse dia fitaovana maoderina izay fitaovana maoderina izay tohanan'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpikirakira Internet ary manampy anao hanangana ny orinasa mora. Ankoatr'izany dia afaka manondrana ny karazan-doka rehetra izy, manangona ary mamonjy azy ireo amin'ny endrika maro toy ny CSV sy JSON. Misy ihany koa ny fanitarana na fametrahana azy ho an'ny asa mifandraika amin'ny fikarakarana cookie, ny mpitsikilo mpampiasa, ary ny mpitsikilo voafetra. Octoparse dia manome ny fahafahana miditra amin'ny API hanamboarana ny fanampiana manokana ataonao.
Raha tsy mahazo aina amin'ireo programa ianao noho ny olana aterak'izy ireo dia azonao atao ny manandrana ny Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser ary fitaovana hafa mitovy amin'izany. Na izany na tsy izany, Getleft dia fitaovana matanjaka iray hafa miaraka amin'ny safidy maro sy ny endri-javatra. Amin'ny fampiasana azy, tsy mila manam-pahaizana amin'ny PHP sy HTML ianao. Ity fitaovana ity dia hahatonga ny fikolokoloana ny tranonkala mora sy haingana kokoa noho ireo programa nentim-paharazana hafa. Izy io dia miasa tsara ao amin'ny tranonkala ary mamokatra XPaths kely kely ary mamaritra ny URL mba ahafahan'izy ireo milamina tsara. Indraindray io fitaovana io dia azo ampidirina amin'ny programa voalohan'ny karazana mitovy Source .